दम्पतीका ६ रोचक प्रवृत्ति, तपाई कुन कित्तामा हुनुहुन्छ ? « Swadesh Nepal
दम्पतीका ६ रोचक प्रवृत्ति, तपाई कुन कित्तामा हुनुहुन्छ ?
हरके दम्पतीमा केहि न केहि बिषेता हुन्छन् । कसैको दाम्पत्य सुखद हुन्छन्, कसैको नाटकिय । यस्ता अनेक प्रवृत्ति हुन्छन्, दम्पतीमा पनि । तपाई कुन कित्तामा पर्नुहुन्छ त रु मूल्यांकन गर्नुहोस् ।
यस किसिमको दम्पतीमा पती वा पत्नीमध्ये एक अभिभावक जस्तै व्यवहार गर्छन् । पती चाहन्छन्, आफ्नी पत्नीले आमाले जस्तै मेरो हेरचाह गरोस् । राम्रो खाना पकाइदियोस् । आफ्नो जरुरतको सबैकुरा जुटाइदियोस् । आमाले जस्तै वात्सल्य प्रदान गरोस् । कतिपय अवस्थमा पत्नीले पनि यस्तै अपेक्षा राख्छिन् । उनीहरु चाहन्छन्, कि आफ्नो पतिले पिताले जस्तै स्नेहपूर्ण व्यवहार गरोस् । आफ्नो रक्षा र केयर गरोस् ।
यस्तो दम्पती कहिले एकअर्काको केयर गर्छन्, कहिले उपेक्षा पनि । अर्थात पेन्डुलम जस्तै कहिले यता त कहिले उता हुन्छ । यिनीहरुको मुड बद्लिइरहन्छ । यस किसिमको दम्पतीमा एक पार्टनरले अर्काको धेरै ख्याल राख्छन् । यद्यपी पार्टनरले आफुप्रति गरेको यस्तो व्यवहार अर्कोले महसुष नै गर्दैनन् । त्यस्तै दोस्रो पार्टनरले केयर गर्न थालेपछि अर्कोले वेवास्ता गरिदिन्छ ।
यसखाले दम्पतीमा एकजना पार्टनरको आत्माविश्वस यति कम हुन्छ कि, अर्कोप्रति पूर्ण निर्भर हुनुपर्छ । यिनीहरुले अर्को पार्टनरलाई आफ्नो आदर्श मान्छन् । आफु स्वंमलाई भन्दा पार्टनरलाई बढी विश्वास गर्छन् ।
समस्या( यिनीहरु आफ्नै बारेमा नकारात्मक धारणा पालेका हुन्छन् । त्यसैले दोस्रो पार्टनर यिनीमाथि हावी हुन्छन् । उसले आफ्नो बढाई(चढाई गर्छन् तर, उनी पनि पूर्ण क्षमतावान हुदैनन् । आफ्नो पार्टनर आफुप्रति निर्भर रहेको र कमजोर रहेको कुराले उनमा जहिले पनि असुरक्षा महसुष हुन्छ ।
यिनीहरु सानोतिनो कुरामा पनि ठाकठुक परिरहन्छ । तर, अर्काको अगाडि निकै मिलेको अभिनय गर्छन् । यस्तोमा दुबै दम्पतीमा परिपक्कताको कमी हुन्छ । यिनीहरुले पार्टनरको भावनाको कदर गर्दैनन् । यिनीहरु त्यसैपनि तर्क बितर्क गरिरहेका हुन्छन् ।
यो स्थिर र प्रतिष्ठित दम्पती हो । यिनीहरुले एकअर्कालाई सम्मान मात्र गर्दैैनन्, स्पेश र प्राइभेसी पनि दिन्छन् । यस किसिमको दम्पतीले पार्टनरको खुबी र कमजोरी दुबै बुझेका हुन्छन् । सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई पनि उनीहरुले सहज रुपमा हल गर्न सक्छन् । यिनीहरुले सार्बजनिक स्थानमा आफ्नो समस्या कहिल्यै खुलाउँदैनन् । उनीहरु एकअर्कामा हावी हुने चेष्टा गर्दैनन् ।
यस्तो दम्पती एकअर्काको निकै ख्याल राख्छन् । साथै अरुको सामुन्ने आदर्श जोडीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्छन् । यिनीहरु आपसमा यति प्रेम गर्छन् कि, उनीहरुको यो घनिष्ठता इष्र्यालाग्दो हुन्छ । यिनीहरु त्यस्तै रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्छन्, जो अरुको निम्ती अनुकरणिय हुन्छ । यिनीहरु कुनै समारोह, भेटघाटमा एकअर्कामा मिल्दो पहिरन लगाएर उपस्थित हुन्छन् ।
समस्या –यस्तो दम्पतीको प्रवृत्ति के पनि हुनसक्छ भने, एकजना बोस बस्ने र अर्को सहसनसिल । वाहिरबाट राम्रो देखिएपनि उनीहरुमध्ये एक पार्टनर दबिएको हुनसक्छन् ।